IRAN oo beenisay inay ka danbeysay Weerarkii Xarumaha Shidaalka Sacuudiga • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / IRAN oo beenisay inay ka danbeysay Weerarkii Xarumaha Shidaalka Sacuudiga
September 17, 2019 - By: Khalid Yusuf
Madaxweynaha Iran Xasan Rouhani ayaa sheegay in dowladiisa aysan wax lug ah ku lahayn weerarkii Sabtidii lagu qaaday labo xarumood oo laga soo saaro shidalkaa dalka Sacuudiga.
Rouhani oo Isniintii shalay magaalada Ankara kula kulmay Madaxweynayaasha Turkiga iyo Ruushka ayaa iska fogeeyey eedeynta uga timid Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo weerarkaasi sheegay inay ka dabeysay Iran.
Trump ayaa bartiisa twitterka ku qoray inay diyaar u yihiin inay ka jawaabaan weerarkaasi, balse ay sugayaan xaqiijinta goobaha laga soo diray droneska ama gantaalada xarumahaasi lagu duqeeyey.
Mar uu Isniintii shalay Trump magaalada Washington ku qaabilayey Amiirka dalka Baxreyn ayuu sheegay in xogta ay hayaan muujineyso inay Iran ka danbeysay weerarkaasi, walow uu sheegay inaysan ku dag dageyn dagaal ay xiligan la galaan wadanka Iran.
Dhinaca kale Afhayeen u hadlay dowlada Sacuudiga ayaa sheegay in hubka lagu soo weeraray xarumahooda lagu sameeyey dalka Iran, balse weli Boqortooyada Sacuudiga ma shaacin goobta ay kasoo duuleen diyaaradaha droneka ee weerarkaasi lagu fuliyey.
Kooxda Xuuthiyiinta Yemen ayaa sheegtay inay iyagu ka danbeeyeen weerarkaasi iyagoo sheegay in 10 diyaaradood oo nooca droneka ah u adeegsadeen duqeyntaasi, balse xogta laga helayo goobaha la wareeray ayaa muujinaya in ugu yaraan 19 qarax uu ka dhacay labada xarumood taasi oo shaki gelisay in xuuthiyiinta ay yihiin kuwa weerarkan fuliyey.
Weerarkan ayaa keenay in Isniintii shalay uu sare u kaco sicirka shidaalka ee suuqyada waaweyn ee caalamka, maadaama dalka Sacuudiga uu yahay dalka ugu weyn ee dhoofiya shidaalkan.
Cabsida laga qabo hoos u dhaca shidaal ayaa la xariirta in weli dowlada Sacuudiga aysan sheegin wakhtiga ay ku qaadan doonto inay dib u furto xarumaha shidaalka ee la duqeeyey. Khasaaraha goobahaasi ka dhashay ayaa la sheegay inuu baahsan yahay.